​हिमाली क्षेत्रको उपहार 'जिम्बु' तेब्बर महँगो
मुस्ताङ । हिमाली क्षेत्रको उपहारको रुपमा चिनिने जिम्बुको मूल्य आकासिएको छ । मुस्ताङ र डोल्पाको माथिल्लो भेगमा पाइने एक किसिमको जडीबुटी जिम्बुलाई तरकारी तथा दालको परिकारमा झानेर खाने परम्परा छ..
कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाको मुआब्जा विवाद टुङ्गियो
पर्वत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजना) को यहाँ निर्माण गर्न लागिएको सवस्टेसनको जग्गा विवाद टुङ्गिएको छ । जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकमसँगै जग्गामा लगाइएको बाली तथा भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति रकम..
​उद्योगी व्यवसायीद्धारा रेल्वेमार्फत ढुवानीको व्यवस्था गर्न माग
पथरी, मोरङ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले तेस्रो मुलुकको वस्तु रेल्वेमार्फत ढुवानीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन..
चिनियाँ सिमेन्ट कम्पनीलाई चौध अर्बको लगानी ल्याउन स्वीकृति
काठमाडौँ । चीनको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक हुवाजिन नारायणी सिमेन्ट कम्पनी ९साङ्घाइ० लाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत रु १४ अर्बको लगानीमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने बाटो खुलेको छ । लगानी बोर्डको आजको..
​नाका अपडेट: कहाँबाट कति गाडी भित्रिय
काठमाडौं । काँकडभिट्टा : शनिबार र आइतबार यो नाकाबाट इन्धनका गाडी आएनन् । आइतबार एक सय १० मालबाहक गाडी भित्रिए । तीमध्ये २० गाडी तेस्रो मुलुकबाट आएको मेची भन्सार प्रमुख..
​जुत्ता चप्पल तथा वस्तुको १२औँ औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना हुने
काठमाडौं । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन अफ नेपाल र नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी सङ्घको संयुक्त तत्वावधानमा यही पुस ९ देखि १५ सम्म जुत्ता चप्पल तथा वस्तुको १२औँ औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना..
बुटबल पावरको नाफा ४७ करोड करोड बढी
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनीले आव २०७१/७२ मा रु ४७ करोड ९८ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीको आज सम्पन्न २३औँ साधारणसभाले गत वर्षको तुलनामा थप रु ३०..
​तस्करी बढेकोप्रति उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चिन्ता
काठमाडौं । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको सबै क्षेत्र चौपट भई संस्थागत रुपमा तस्करी हुन थालेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासङ्घले..
​माघको पहिलो सातादेखि भूकम्पपीडितको यथार्थ विवरण उपलब्ध हुने
काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आगामी आउँदो माघको पहिलो सातादेखि भूकम्पपीडितको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिलो चरणमा दोलखा जिल्लाबाट तथ्याङ्क..
​सुनको मूल्यमा फेरि गिरावट, तोलाको ४७ हजार ७ सय
काठमाडौं । पछिल्लो समय लगातारजसो ओरालो लाग्दै गरेको सुनको मूल्यमा शुक्रबार पनि गिरावट आएको छ । छापावाल सुन शुक्रबार तोलामा सातसय रुपैयाँले घटेको छ । छापावाल सुन आज प्रतितोला ४७ हजार..
​फेन्टा, पेप्सी र मिरिण्डामा अखाद्य वस्तु, ५१ वटा कम्पनीमाथि मुद्दा दायर
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले फेन्टा, पेप्सी र मेरिण्डामा अखाद्य वस्तु भेटिएको भन्दै ती कम्पनीहरुमाथि मुद्दा चलाएको छ । बोटलर्स नेपालको उत्पादन फेन्टा र वरुण वेभरेजद्वारा उत्पादित पेप्सी..
​दश घन्टा विद्युत्भार कटौती हुने, शुक्रबारदेखि सातामा ७० घन्टा लोेडसेडिङ
काठमाडौँ । नदीमा पानीको प्रवाह घटेका कारण विद्युत् उत्पादनमा कमी आएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको समय बढाएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी सातामा ७० घन्टाको दरले विद्युत्भार..
​चीनसँग इन्धन आयातको सम्झौता गर्न प्रतिनिधिमण्डल जाँदै
काठमाडौँ । चीन सरकारसँग इन्धन आयातलगायत अन्य व्यापारिक सम्झौता गर्न सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यही पुस ८ गते त्यसतर्फ जान लागेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि इन्धन आयात गर्ने विषयमा सरकारका विभिन्न..
​मूल्यवृद्धि करिब १२ प्रतिशत, नाकाबन्दीले आयात निर्यात दुवै घट्यो
काठमाडौँ । तराई मधेसमा भइरहेको लगातारको बन्द हडताल तथा अघोषित नाकाबन्दीले आपूर्ति प्रणालीमा अवरोधका कारण काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा..
​चिनियाँ अनुदानको इन्डक्सन कुकर र खाद्यान्न आयो
काठमाडौं । चीनले अनुदानमा दिएको इन्डक्सक कुकर, खानेतेल, नुन र चामल नेपाल भित्रिएको छ । रसुवागढी भन्सार हुँदै चीनले अनुदानमा चुलो र खाद्यान्य नेपाल पठाएको हो । यसको मूल्य १०..
​भारतीय रुपैयाँ नपाउँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुण्डीको अवैध कारोबार
वीरगन्ज । बजारमा भारतीय रुपैयाँको अभाव भएकाले वीरगन्जका उद्योग व्यावसाय मात्र होइनन्, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अति आवश्यक सेवासमेत प्रभावित भएका छन् । भारतीय रुपैयाँको अभावसंगै सीमावर्ती क्षेत्रमा हुन्डीको अवैध कारोबार..
​मंगलबार दिनभरमा कहाँबाट कति भित्रियो इन्धन? नाकाहरु पछिल्लो समय सहज बन्दै
काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरुबाट पछिल्लो समय आयात सहज बन्दै गएको छ । मंगलबार दिनभरमा झापाको काँकड्भिट्टाबाट ७ ट्यांकर डिजेल, २ ट्यांकर पेट्रोल, १ ट्यांकर मट्टीतेलसहित १ सय ५५ ओटा..
पूर्वी नाकाबाट १०८ ट्याङ्कर इन्धन भित्रियो
काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएको पूर्वी नेपालको नाका सहज भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने क्रम बढेको छ । क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार गएराति मात्र पूर्वी नाका झापाको कांकडभिट्टा–पानीट्याङ्की र मोरङको..
​ग्याससहित पेट्रोल–डिजेल सोमबार कहाँबाट कति भित्रियो ?
काठमाडौं । भारतसँगका केही सीमानाकाहरु आयात पछिल्लो दिनमा खुकुलो बन्दै गएको छ । सोमबार साँझसम्म झापाको काँकड्भिट्टाबाट नाकाबाट ११ ट्यांकर डिजेल, ३ ट्यांकर पेट्रोल, १ हवाई इन्धनसहित ६७ ओटा मालबाहक..
भन्सार नाकाहरु सहज बन्दै, कुन नाकाबाट कति गाडी भित्रिए ?
काठमाडौं । भारतीय सिमा नाकाहरु क्रमशः खुकुलो हुँदै गएका छन् । दुई महिना देखि जारी भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण अवरुद्ध सिमा नाकाहरुबाट शनिबार उल्लेख्य मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र अन्य..
​म्याद गुज्रिएको आशंकामा डाबर नेपालको ९० कन्टेर रियल जुस अख्तियारको नियन्त्रणमा
वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडाको टोलीले भारत लैजान लागिएको डाबर नेपालको ९० कन्टेर रियल जुस नियन्त्रणमा लिएको छ । कन्टेनरमा म्याद गुज्रिएका जुस पनि बजारमा लैजान..
​धरानमा दैनिक १० सिलिन्डर बायोग्यास उत्पादन
धरान । सुनसरीको धरानमा गाईको मलमुत्रबाट बायोग्यास उत्पादन सुरु गरिएको छ । स्थानीय व्यवसायी घनेन्द्र कार्की र लोकबहादुर खापुङले ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा २ सय घनमिटर क्षमताको बायो ग्यास प्लाण्ट..
​विद्युत प्राधिकरणमा लागेको गलगाँड २ साताभित्र फाल्छुः उर्जा मन्त्री रायमाझी
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई हटाउने संकेत गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री रायमाझीले एमाओवादी सम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन विद्युत प्राधिकरण एकाइको..
​शुक्रबार कहाँबाट कति आयो इन्धन ?
काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएका देशका केही व्यापारिक नाकाहरुबाट इन्धनलगायतका मालबाहक गाडी आउनेक्रम जारी छ । झापाको काँकडभिट्टा–पानीट्यांकी नाकाबाट शुक्रबार दिनभरमा २ ट्यांकर पेट्रोल, ८ ट्यांकर डिजेल, १ ट्यांकर मट्टीतेल, १..
​उपत्यकामा व्यवस्थित आवास निर्माणका लागि २३३ योजनालाई अनुमति
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवस्थित आवास निर्माणका लागि जग्गा विकास, संयुक्त आवास र सामूहिक आवास गरी २ सय २३ योजनालाई अनुमति दिइएको छ । उपत्यकामा अव्यवस्थित बसोबास रोकी व्यवस्थित सहर..
​सुन तोलामा चारसय रुपैयाँले सस्तियो
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा चारसय रुपैयाँले घटेको छ । छापावाल सुन आज प्रतितोला ४८ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनााएको छ..
​फेरि थपियो : आय कर र बिबरण बुझाउने म्याद पुष मसान्तसम्म, भ्याट, अन्तशुल्क, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर पुष २५ सम्म
काठमाडौं । भुकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा गंभीर असर पारेकाले आन्तरिक राजश्व बिभागले आय कर बिबरण, मूल्य अभिबृद्धि कर तथा अन्य करहरु बुझाउने म्याद फेरि थपेको छ । गत असोज मसान्तसम्म..
​नाका सहज बन्दै गर्दा विहीबार कहाँबाट कति आयो इन्धन
काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएका देशका केही व्यापारिक नाकाहरुबाट विहीबार सहजरुपमा आपूर्ति भएको छ । विराटनगर–जोगबनी नाकाबाट विहीबार साँझसम्म २८ ट्यांकर डिजेल, ११ ट्यांकर पेट्रोल, १४ बुलेट ग्यास, १ ट्रक औषधिसहित..
​नाका सहजताले नाकाबन्दी खुलेको संकेत, २१ बुलेट ग्याससहित पेट्रोल, डिजेल आयो
काठमाडौं, । भारतले बिगत ७९ दिनदेखि लगाउदै आएको नाकाबन्दी खुल्ने संकेत देखिएको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका देशका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरु विहीबार केही सहज बनेका छन् । विहीबार दिउँसोसम्म विराटनगर–जोगबनी नाका..
नेपालमा लगानी बढाउँदै युनिलिभर ५ अर्ब लगानी थपिँदै, खाद्यान्न र पेयपदार्थको पनि उत्पादन थाल्ने
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले नेपालमा आफ्नो लगानी बढाउने भएको छ । एक दर्जन ब्रान्ड नेपालमा नै उत्पादन गरिहेको कम्पनीले आयात गरिरहेका आफ्नो ब्रान्डलाई नेपालमा नै उत्पादन गर्न लागेको हो..
Results 889: You are at page 20 of 30